Miandry izay higadonany
Efa tongotra mby an-dakana ny fanatanterahana ny fifidianana na somary mizara roa aza ny hevitra ho an’ny mpanao politika.
Miandry izay higadonan’ny fotoana tena voafaritry ny lalàna hanaovana fampielezan-kevitra isika izao na efa misy aza ny nanao fampielezan-kevitra mialoha ny fotoana. Miandry koa izay mety hafitsok’ireo mbola misalasala sy tsy miombon-kevitra, izay milaza ny tsy hipetra-potsiny. Miandry ihany koa ny tohin’ny resaka mafampana, toy ny anton-dian-dRajoelina any Frantsa. Malaza ny resaka raharaham-pitsarana mety hahasaringotra azy na ny namany akaiky mpanohana ara-bola amin’ny fifidianana. Liana ny maro hoe: pehan’ny Frantsay izay voalaza fa isan’ny manohana azy akaiky ve satria nahagaga ny maro ny nampangina tampoka ilay famoriam-bahoaka nirarakopana teo, toa zary gina sy sina, hany ka hatramin’ireo ekipa sasany aza gaga hoe nankaiza? Misy aza ny somary mananihany hoe: “ombay mitady”. Tsy sanatria natao hanakianana na hanenjehana fa misy ny liana hoe sao mba nandeha naka vatsy kosa e ! Tsy izy irery rahateo fa misy ihany koa ny kandida sasany miketrika mafy amin’ity fandehanana mankany ampita ity, izay heverina fa miketrika lalam-bola ny ankamaroany. Hifampidera taim-by amin’ity resaka fananam-bola be ity, ka asa lahy any anaty voka-pifidianana any na hilamina ihany na tsia ? Ny vahoaka ihany koa mantsy efa miandry ilay fotoana hanehoany ny safidiny hoe: iza no tena nahavita sy mbola hahavita, hanarina fa tsy hamotika,...